Plastic Ice No
600L Plastic Nzvimbo mudziyo
Product Features Zvinhu chikafu Pe mugiredhi sezvo mbishi zvinhu, mumwe-danho Kuumbwa kuti miviri-decker midziyo inogona zvakakwana kushanda pasi -40 ℃. Acid uye alkali nemishonga, yakaoma uye hunogara. Nyore noruoko ruoko nhovo Jack kubva kumativi maviri uye noruoko forklift rori kubva kumativi ose mana, stackable. Range pamusoro Application rimwe: Food kugadzirwa. B: Raw zvinhu chando okuchengetera. d: Low tembiricha inotonhora okuchengetera turnover. d: Low tembiricha thawing pamusoro hwemvura zvinhu uye nyama zvigadzirwa. E: Fresh uye two chilled refrigerated ...
550L Plastic insulated No chando bhokisi